Mayelana Nathi - SHENZHEN LONGRAY TECHNOLOGY CO., LTD.
I-Shenzhen Longray Technology Co., Ltd.
ukukhiqiza nokuthengisa umshini olandelayo wokuvikela abantu, izilwane, izitshalo, ukubulala amagciwane kanye nendawo ehlanzekile.
Ibanga lomkhiqizo we-Longray: I-Thermal fogger, i-ULV Cold fogger kagesi, i-ULV Cold Fogger engenantambo Esebenza Ibhethri, umshini wokushisa ofakwe elolini, i-ULV ebandayo efakwe elolini, isiteshi sokubulala amagciwane, njll. Uma kukhona ukucushwa kwe-fogger, amathuba siyakwenza.
Ibanga elide le-Thermal Fogger lihlanganisa:
I-Backpack Thermal Fogger, i-Thermal Fogger ebanjwe ngesandla kanye ne-Thermal Fogger efakwe ngeloli.Banikeza inzuzo eshisayo ye-Fogger yobuchwepheshe obuncane be-fog droplet ukubulala amagciwane ezitshalo zezolimo.
I-Thermal Fogger Idala amaconsi amahle, acishe angabonakali athinta izinambuzane ezindizayo, kanye nalezo ezihlala endaweni yezitshalo.I-Thermal fogger yethu iyakwazi ukukhiphela kokubili, amanzi kanye namakhemikhali asekelwe kuwoyela.
Izingqimba ze-Teflon ne-Viton zenza zonke izimpawu, ama-gaskets, nama-diaphragm angena ngamakhemikhali kunoma yiluphi uhlobo lwesixazululo esithelwa ngaphakathi kuzo.
Uhlu olude lwama-ULV foggers abandayo luhlanganisa: I-ULV ebandayo ye-ULV esebenza ngebhethri, i-ULV ebandayo ye-ULV kagesi, kanye ne-ULV ebandayo efakwe ngeloli.Ama-fogger ethu asiza ukulawula izinambuzane kalula ezindaweni ezisezintabeni nasehlathini.
Isilawuli sokugeleza esilungiseka ngokungenamkhawulo sinikeza izinga lokugeleza elidingekayo kanye nosayizi weconsi lenkungu.Lezi zilungele ukusetshenziswa ezindaweni zokugcina, izimboni, ubisi, izinkukhu zezinkukhu, izitshalo zokucubungula ukudla kanye nezindawo zokugcina izithombo.
Bangakwazi ukufafaza zonke izinhlobo zamakhemikhali, asetshenziselwa ukuvikela impilo yomphakathi, okuhlanganisa ukubulala amagciwane, ukulawulwa kwe-vector, ukulawula izinambuzane nokuvikela izitshalo.
Uhlu lwethu lwamayunithi Esiteshi Sokubulala Amagciwane Kwezimoto luklanyelwe ukushesha, lubulale amagciwane ezimotweni zokuhamba kanye nabantu abadinga ukungena ngaphakathi kwendawo evikelekile yenhlanzeko, noma baphume endaweni ethile engcolile.Ifakwe inzwa ye-infrared, ifaka isifutho esizenzakalelayo ukuze siqondise esidlula esiteshini.Bafaka isifutho se-ULV esebenzisa amakhemikhali amancane, sifinyeze isikhathi sokufafaza, sisindise abasebenzi, kodwa sinikeze isibulala-magciwane esisebenza ngempumelelo.Kulula ukuyifaka futhi kusiza ukuhlukahluka kwe-engeli yokufafaza engalungiswa ukuze ifafaze kahle kuwo wonke ama-engeli nakuyo yonke indawo eqondiwe.